‘पहिले देउवाले सहयोग गर्छु भन्दा लिएनन्, अहिले भेट्नै सकेनन्’
ललितपुरको कुपण्डोल–पुल्चोक सडकबाट बखुण्डोल मोडिने कर्नरमा एउटा सानो सटरमा सैलुन पसल छ, जहाँ सियाराम ठाकुरले तीन दशक बिताए । शुरूमा पुल्चोकको मूल सडकमा उनको सैलुन पसल थियो, तर भाडा तिर्न नसकेपछि उनी कर्नरको एउटा साघुरो सटरमा बसेर निरन्तर काम अगाडि बढाइरहेका छन् । अगाडि सडकमा भाडा तिर्न नसकेपछि घरभेटीले नै उनलाई सानो सटर बनाइदिए ।
पञ्चायतको समयमा काठमाडौं आएर सैलुन पसल सञ्चालन गरेका सियारामले उनकै शब्दमा ‘तीन जुग’का मन्त्रीहरूको कपाल काटे । पञ्चायत, प्रजातन्त्र काल र गणतन्त्रको समयमा धेरै मन्त्रीको दारी कपाल सिंगार्ने काम उनले गरे । अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री रहेको समयमा २०४८ पछिका दिनमा उनले कपाल काटिदिन्थे ।
‘उहाँको अलि छटपटे बानी थियो, आज मिटिङ छ, छिटो–छिटो काटिदेऊ भन्ने’ पुराना दिन सम्झिँदै सियारामले भने ।
जतिबेला बाहिर कपाल काटेको शुल्क लगभग ५० रुपैयाँ थियो मन्त्री क्वार्टरमा गएर कपाल काट्दा देउवाले ५ सय रुपैयाँ दिन्थे ।
लामो समय कपाल काट्दा देउवासँग उनको भेट बाक्लिँदै गयो । गृहमन्त्री रहेको समयमा देउवाले सियारामलाई केही सहयोग गर्न खोजेका थिए, तर आफ्नो कमाइ राम्रै रहेका उनले खासै लोभ गरेनन् । दोस्रो व्यक्तिले कर गरेपछि मात्र सियारामले मन्त्रालयमा एउटा निवेदन हालेका थिए, निवेदनको काम चलिरहेको समयमा संसद् विघटन भएपछि उनको काम अलपत्र भयो ।
गृहमन्त्रीबाट हटेपछि देउवासँग उनको भेट एकपटक महेन्द्र पुलिस क्लबमा भयो । पूर्व अञ्चलाधीश बद्रिविक्रम थापाको छोरा किरण विक्रम थापाले आयोजना गरेको भोजमा । ‘मैले उहाँको धेरैपटक कपाल काटेँ, त्यो बेला उहाँले मलाई सहयोग गर्न खोज्नुभएको थियो जतिबेला मलाइ आवश्यक थिएन, अहिले सहयोग चाहिएको छ प्रधानमन्त्रीलाइ भेट्नै सक्दिनँ,’ उनले भने ।
२०४२ सालका काठमाडौं आएर सैलुन पसल शुरू गरेका सियारामले पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्म मन्त्री बनेका नेताहरूको कपाल मिलाइदिए । त्यो बेला सीमित सैलुन पसल रहेकोमा पुल्चोक आसपासमा उनको मात्र पसल थियो । मन्त्री क्वार्टरमा कपाल काट्ने जिम्मा उनकै हुन्थ्यो– पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्म । त्यो बेला पुल्चोक सडकमा सटर भाडा ४ सय रुपैयाँ थियो ।
‘भीआइपी’ मध्ये उनले सबभन्दा धेरै कपाल काटेको व्यक्ति डा. रामवरण यादवको हुनुपर्छ । मन्त्री हुँदा या नहुँदा प्रायः सियारामले नै रामवरणको कापाल काट्ने गरेका थिए । २०५८ साल जेठमा दरबार हत्याकाण्ड भएपछि सियारामको सैलुनमा कपाल काट्नेको लामो लाइन थियो, रामवरण यादव कपाल खौरिन ७ पटक आए । तर भीड भएपछि साँझ सियाराम रामवरणको घरमै गएर कपाल काटिदिए । ‘उहाँले गाडी पठाइदिएपछि साँझ घरमै गएर कपाल काटें, त्यो बेला कुसुन्तीतिर बस्नु हुन्थ्यो’ सियारामले सम्झिए ।
आफूले धेरै पटक कपाल काटेको र एउटै भेगको नेता डा. रामवरण राष्ट्रपति भएकोमा उनी ज्यादै खुशी थिए । एक दिन राष्ट्रपतिलाई भेट्न भन्दै कार्यालय पुगेका थिए । ‘सामान्य आदमीले भेटन पाउँदैन भनेर फर्काइदिए, मन खिन्न भयो, फेरि गइनँ,’ ठाकुरले सम्झिए ।
२०४८ सालपछि मन्त्री बनेका कांग्रेसका नेताहरू शायदै होलन्, सियारामले कपाल नकाटेको । कृष्णप्रसाद भट्टराई, शेरबहादुर देउवादेखि रामचन्द्र पौडेल, पूर्णबहादुर खड्कादेखि गोविन्दराज जोशीसम्मका नेताहरूको कपाल काट्ने काम उनले गरे ।
भैँसेपाटी र बाँडेगाउँमा बसाइँ सर्नुअघि भट्टराईको कपाल मिलाउने काम सियारामकै थियो । तिनताका भट्टराई बखुण्डोलमै बस्दथे । ‘पान खान निक्सने बेलामा पनि, अच्छा हे न ठाकुरजी ? भन्दै जाने आउने गर्नुहुन्थ्यो,’ ठाकुरले स्मरण गरे ।
सद्भावनाका अध्यक्ष गजेन्द्र नारायण सिंहदेखि बद्री मण्डल र खोवारी रायसम्म उनका ग्राहक थिए । गणतन्त्र स्थापना भएपछि उनले माओवादीका स्व. पोष्टबहादुर बोगटी तथा हाल राजनीतिबाट अलग रहेका लोकेन्द्र विष्ट मन्त्री भएको समयमा कपाल काटे । २०४८ पछि मन्त्री बनेका अधिकांशको कपाल काटे पनि कसैको नाम बिर्सिए ।
पञ्चायतकालका गृहमन्त्री एवं राप्रपा नेता भोजराज घिमिरे, यमबहादुर मल्ल, रामविलाश यादव, सोनेलाल यादव, महेश्वर सिंह लगायत धेरैको कपाल सियारामले मिलाए ।
२०५६ सालमा तारानाथ रानाभाट प्रतिनिधि सभाको सभामुख बनेपछि उनका एक ग्राहक थपिए । ‘सभामुखजीले धेरै माया गर्ने, दशैंमा च्याङ्ग्राको मासुसित भात खुवाउनुभएको थियो,’ सियारामले पुराना दिन सम्झिए ।
नेकपा एमालेका नेता स्व. भरतमोहन अधिकारीले पछिल्लोपटक अर्थमन्त्री हुँदासम्म उनको सेवा लिएका थिए ।
‘महोत्तरीस्थित मेरो गाउँमा जग्गा लिएर मन्दिर बनाउँछु भन्नु भएको थियो, मलाई जग्गा खोजिदिन आग्रह पनि गर्नुभएको थियो, पछि खासै सम्पर्क भएन,’ सियारामले सम्झिए ।
‘भीआईपी’ग्राहकलाई भनेर अरूलाई जागिर लगाइदिए, आफ्नै छोरीलाई लगाउन सकेनन्
राष्ट्रिय राजनीतिका चर्चित अनुहारसँगै उनले समाजका अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको पनि कपाल काटे । पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, पूर्व गभर्नर सत्यन्द्रप्यारा श्रेष्ठलगायत धेरै भीआईपीको कपाल काटे ।
आफ्ना रेगुलर ग्राहक नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर सत्यन्द्रप्यारा श्रेष्ठलाई भनसुन गरेर उनले दुई जनालाई राष्ट्र बैंकमा कार्यालय सहयोगीमा जागिर खुवाइदिए ।
‘त्यो बेला गभर्नरले जागिर खान आऊ भन्नुभएको थियो, तर म गइनँ । ६/७ जनालाई रोजगारी दिएर आफैँ पसल सञ्चालन गरेको मान्छे जागिर खान जाने कुरै भएन,’ उनले स्मरण गरे ।
तीन छोरी र दुई सन्तानका पिता सियारामकी माइली छोरी पाटन कलेजमा स्नातक पढ्दै छिन् । कान्छी छोरी ११ कक्षामा पढ्दैछिन् । तर अहिले स्नातक गर्दै गरेकी छोरीलाई जागिर लगाउन उनले धेरैलाई हारगुहार गरे, कसैले सहयोग गरेनन् ।
‘छोरी जागिर गर्दै पढ्दै गर्छु भन्छे, तर हाम्रो कुरा कसैले पुच्छ्दैन,’ सियारामले दुखेसो पोखे ।
अहिले ब्याच्लर पढ्दै गरेकी छोरीको उमेरमा उनले काठमाडौं आएर व्यावसाय शुरू गरिसकेका थिए ।
जिन्दगीको ६० औं वसन्त नजिकिँदै गर्दा उनलाई जीवनको संघर्षदेखि थकाइ लाग्न थालेको छ ।
‘पहिले कमाइ राम्रो थियो, खर्च थिएन । अहिले खर्च ज्यादा छ, कमाइ छैन,’ सियारामले भने, ‘छोराछोरीलाई कतै जागिर लगाउन सकियो भने अब विस्तारै गाउँ फर्किने हो ।’